Dr Robinson Jean-Louis: “Baikom-panjakana no nandresen’ny Sinoa ny Coronavirus” | NewsMada
Dr Robinson Jean-Louis: “Baikom-panjakana no nandresen’ny Sinoa ny Coronavirus”
“Ny fanarahana ny baikon’ny fanjakana sinoa no nahatonga ny fandresena ny aretina Coronavirus. Amin’izao fotoana izao, efa nilaza ny toerana nipoirany, i Wuhan, fa tsy misy trangan’aretina intsony ao ary efa nivoaka ny hopitaly ny olona sitrana farany” , hoy izy niditra an-talefaonina tamin’ny haino aman-jery tsy miankina iray momba ny ahombiazann’ny Sinoa miady amin’ny fihanaky ny Coronavirus. Efa maharesy ny virus ny Sinoa fa misy ireo avy any ivelany miverina ao Sina no atahorany fa mbola misy mitondra aretina indray. Mbola mailo hatrany ry zareo amin’izao fotoana izao, na efa resiny aza ny aretina.
Matoa resiny izany io aretina io: voalohany ny fitazonana ny tsirairay avy tsy hivoaboaka sy tsy handehaleha eny an-dalana; farany aza, tsy nahazo nivoaka mihitsy. Ny nandresen’ny Sinoa ny Coronavirus, nihaino ny baiko sy ny torohevitra rehetra avy amin’ny fanjakana ao aminy ry zareo.
Areti-mandoza mahafaty ny Coronavirus
“Areti-mandoza mahafaty ny Coronavirus, tsy hita maso. Sarotra ny mitsabo azy rehefa tonga, indrindra ho an’ireo olona mahazoazo taona sy manana areti-mitaiza”, hoy izy. Maka ny fepetra rehetra raha misy ny tokony hivoahana ny trano: miantso mpitandro filaminana sy ny dokotera ary ny mpikarakara momba ny Coronavirus.
Miaina mandritra ny iray volana sy tapany ny Coronavirus, misy milaza hoe roa volana sy tapany. Mandritra ny tapa-bolana ny fihibohana an-trano sy fanaovana ny fepetra nolazain’ny fanjakana. Amin’izany, vitsy dia vitsy ny olona voany. Ijerena ny fihanaky ny aretina ny fihibohana 15 andro.
Na izany aza, tokony hitandrina izay ao an-trano. Ora roa na telo eo ny virus-na Corona no mipetaka amin’ny varavarana, ohatra. Ny fifaneraserana no tena ahazoana azy, raha tsy mitandrina. Mora maty ihany io virus io fa tsy mahatanty ny maripana 27°, ary miaina mandritra 14 andro: midina ny heriny amin’izay ary malemy izy.
Hatrany am-boalohany ny fitandremana
“Ny mipetraka ao an-trano, tena tsy andaniam-bola be loatra. Tsy mivoaka rehefa tenenina hoe tsy mahazo mivoaka”, hoy ihany izy. Raha vao nitranga ilay aretina, nitandrina ny fanjakana sinoa. Nanomboka teo, tsy mahazo mivoaka ny olona. Nohidina avokoa ny oniversite, ohatra, ny tanàna…
Miandalana izay tsy fahazoana mivoaka izay, ary tonga ny fihibohana tanteraka rehefa tonga tany amin’ny dingana fahatelo ny fihanaky ny aretina. Amin’izany, ny fanjakana sy ny iraka eo an-tanàna no mitondra ny entana toy ny sakafo any an-tranon’ny tsirairay avy. Ny fanjakana sinoa no mikarakara ny eo an-tanàna any amin’ny faritany na ny tanàn-dehibe.